घर » भर्खरका समाचार लेखहरू » उड्डयन » एरिजोना मा हेलिकप्टर र विमान ठोक्किँदा २ जनाको मृत्यु भएको छ
एयरलाइन्स • हवाई अड्डा • उड्डयन • ब्रेकिंग यात्रा समाचार • समाचार • मान्छे • सुरक्षा • पर्यटन • यातायात • यात्रा तार समाचार • अहिले प्रचलनमा • संयुक्त राज्य अमेरिका ब्रेकिंग न्यूज
मिडएयर टक्कर शुक्रवार बिहान एरिजोना राज्य फिनिक्स को राज्य को एक उपनगर मा स्थित चान्डलर नगरपालिका एयरपोर्ट नजिकै भयो।
एरिजोना मा म्याक्वीन र क्वीन क्रीक नजिक एक हेलिकप्टर र एक फिक्स्ड विंग विमान को बीच मिडएयर टक्कर भयो।
विमान सुरक्षित रूपमा अवतरण गर्न सक्षम थियो तर हेलिकप्टर दुर्घटनाग्रस्त भयो र आगो लाग्यो, जसमा सवार २ जनाको मृत्यु भयो।
चाँदलर नगरपालिका बिमानस्थलमा अर्को सानो विमान दुर्घटना भएको तीन महिना पछि यो दुखद दुर्घटना भयो।
चण्डलर नगरपालिका बिमानस्थल नजिकै एक हेलिकप्टर र एउटा सानो बिमान बीचमा ठोक्किए एरिजोना.
एरिजोनाको चान्डलर नगरपालिका बिमानस्थल नजिकै हेलिकप्टर खसेको छ
विमान सुरक्षित रूपमा अवतरण गर्न सफल भयो, तर हेलिकप्टर दुर्घटनाग्रस्त भयो र आगोमा विस्फोट भयो।
हेलिकप्टरमा सवार दुबै यात्रुहरु मारिएका छन्, जबकि विमानका यात्रुहरु सकुशल हिडेका छन्।
मिडएयर टक्कर शुक्रवार बिहान चान्डलर नगरपालिका बिमानस्थल नजिकै भएको थियो एरिजोनाको राज्य को राजधानी शहर फिनिक्स.
चान्डलर फायर बटालियनका प्रमुख किथ वेल्चले पुष्टि गरे कि हेलिकप्टरमा सवार दुई जना मारिएका थिए, जबकि एक हल्का प्रोपेलर संचालित विमानका यात्रुहरुलाई चिकित्सा ध्यानको आवश्यकता थिएन।
जमिनमा कोहि घाइते भएनन्।
दुर्घटना को स्थिति अस्पष्ट छ, र चान्डलर पुलिस साक्षीहरु र घटना को भिडियो फुटेज को लागी एक फोन राखीएको छ।
तुरुन्तै पछि स्थानीय पत्रकारहरु द्वारा साझा गरिएका छविहरु लाई एक रनवे को बाहिर बस एक स्ट्यान्डिल मा देखाइन्छ, स्पष्ट रूप देखि पूर्ण रूप मा बरकरार छ।
छुट्टाछुट्टै फुटेजमा हेलिकप्टरको अवशेष देखिएको छ जुन फोहोर जमिनको प्याच जस्तो देखिन्छ, आंशिक रूपमा आपतकालीन कामदारहरु द्वारा एक तिरपालले ढाकिएको छ।
चाँदलर नगरपालिका बिमानस्थलमा एउटा सानो विमान दुर्घटना भएको तीन महिनापछि यो दुखद दुर्घटना भएको हो। जुलाई मा फिर्ता, एक एकल इन्जिन बीचक्राफ्ट बोनान्जा B36 बोर्ड मा चार जना संग दुर्घटनाग्रस्त भयो र उडेको केहि बेर पछि आगो लाग्यो, एक कब्जाकर्ता लाई अस्पताल पठाइयो र तीन अन्य घाइते।